यी राशि भएका व्यक्तिहरुमाथि भगवान शिवको कृपा बर्सिने छ
HomeDharmaयी राशि भएका व्यक्तिहरुमाथि भगवान शिवको कृपा बर्सिने छ
गणेशजीले तपाईंलाई आफ्नो ज्वलन्त स्वभावमा संयम राख्न सल्लाह दिनुहुन्छ। शारीरिक र मानसिक रूपमा आरामको अनुभव गर्नुहुनेछ। मिहिनेत गरे पनि थोरै सफलता मिल्नेछ । सन्तानको बारेमा पनि चिन्तित रहनेछ । कामको चापका कारण परिवारका सदस्यप्रति कम ध्यान दिन सकिनेछ । हानिकारक विचार, व्यवहार र घटनाहरूबाट टाढा रहनुहोस्। पेटको रोगले पेट दुख्ने सम्भावना छ। यदि सम्भव छ भने, म यसलाई आज स्थगित गर्नेछु। सरकारी काममा सफलता मिल्नेछ ।
आज काम गर्नमा बलियो मनोबल र आत्मविश्वासको पूर्ण सहयोग प्राप्त हुनेछ, यो भगवान गणेशको आशीर्वाद हो। यस कार्यको अपेक्षा अनुसार फल पनि मिल्नेछ। मातृ पक्षबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ । विद्यार्थीको अभ्यासमा रुचि रहनेछ। सरकारी क्षेत्रमा लाभ हुनेछ र आर्थिक कारोबारमा सफलता मिल्नेछ। सन्तानको पछाडि खर्च हुनेछ ।
नयाँ कार्यको थालनी गर्न आजको दिन शुभ रहेको गणेश बताउँछन्। सरकारबाट पनि लाभ हुने सम्भावना छ । व्यापार वा व्यापार क्षेत्रमा उच्च अधिकारीबाट राम्रो प्रतिक्रिया मिल्नेछ। छोटो बसाइ व्यवस्थित हुन सक्छ। साथीभाइ वा प्रियजन वा छिमेकीसँग मनमुटावको घटना भएको छ भने त्यसको सकारात्मक परिणाम आउनेछ। वैचारिक रूपमा, परिवर्तनहरू धेरै चाँडै आउनेछन्। प्रतियोगीहरु विजयी हुनेछन् । तैपनि आर्थिक दृष्टिले सजग रहनुपर्ने समय रहेको गणेशले सुझाव दिएका छन् ।
आज गणेशजीले नकारात्मक मानसिकताको साथ व्यवहार नगर्न सल्लाह दिनुहुन्छ। शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अस्वस्थ रहनुहुनेछ । मनमा दु:ख र असन्तुष्टिको भावना रहनेछ। आँखा दुख्ने सम्भावना छ । पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहनेछैन। घरपरिवारका सदस्यहरुसँग मनमुटाव नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोला । विद्यार्थीहरूले अभ्यासमा रुचि राख्दा पनि अपेक्षित नतिजा पाउन सक्दैनन्। अनैतिक प्रवृत्तिबाट टाढा रहनुहोस्। धन धेरै खर्च हुनेछ ।
आज तपाईमा आत्मविश्वासको मात्रा बढ्नेछ, गणेशजीले बताउनुहुन्छ। कुनै पनि काममा छिटो निर्णय लिनेछ। बुबा र ठूलाबाट लाभ मिल्नेछ। सामाजिक सम्मानमा वृद्धि हुनेछ । बोली र व्यवहारमा आक्रामक नहुनु गणेशको सल्लाह छ। क्रोधको मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हुनेछ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला।
See also Lakshmi God : यी ४ राशिका मानिसमा सधैँ रहन्छ माता लक्ष्मीको आशिर्वाद !
आज गणेशजीको सल्लाह छ कि कसैको अहंकारमा चोट नपुगोस् र कसैसँग झगडा नहोस्। शारीरिक रूपमा अशान्ति र मानसिक चिन्ता रहनेछ। साथीभाइ तथा आफन्तसँग वैचारिक मतभेद हुनसक्छ। स्वभावमा विशेष क्रोध र क्रोध रहनेछ। धार्मिक कार्यमा धन खर्च हुनेछ । स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला । आकस्मिक धन खर्च हुनसक्छ । यदि सम्भव छ भने, विवाद वा झगडाबाट टाढा रहनुहोस्।
तपाईका लागि आजको दिन शुभ रहने गणेशजीले बताएका छन् । विभिन्न क्षेत्रमा लाभ मिल्ने हुँदा तपाईको खुसीमा वृद्धि हुनेछ। तपाईको आम्दानीमा पनि बृद्धि हुनेछ । साथीभाइको पछाडी खर्च हुनेछ र उनीहरूबाट लाभ पनि मिल्नेछ। पर्यटकीय स्थलमा बस्न वा भ्रमणले दिन रमाइलो बनाउनेछ। आज विवाहितहरूका लागि जीवनसाथी मिल्ने सम्भावना छ। मिष्ठान्न भोजन पाइनेछ ।
तपाईका लागि आजको दिन शुभ रहने गणेशजीले बताएका छन् । व्यापार व्यवसायमा वातावरण अनुकूल रहनेछ। उच्च अधिकारीहरु खुसी रहनेछन् । आज काममा सफलता मिल्नेछ । मान-सम्मानमा पनि वृद्धि हुनेछ । नोकरीमा पदोन्नति हुनेछ। घरायसी जीवनमा पनि खुशीको वातावरण रहनेछ। व्यापारिक प्रयोजनका लागि कतै बाहिर जानु पर्न सक्छ । सन्तानको प्रगतिबाट सन्तुष्टिको अनुभूति हुनेछ।
आज स्वास्थ्य सामान्य रहने सम्भावना छ। शारीरिक रूपमा शक्तिहीनता र आलस्यको अनुभूति हुनेछ। मानसिक रूपमा पनि चिन्ता र चिन्ता रहनेछ। व्यापारमा अवरोध आउन सक्छ। सम्भवतः हानिकारक विचारहरू टाढा राख्नुहोस्। कुनै पनि काम सावधानीपूर्वक व्यवस्थित गर्नुहोस्। उच्च अधिकारीसँग मनमुटावको घटना हुनेछ। सम्भव भएमा प्रतिद्वन्द्वी र प्रतिद्वन्द्वीसँग बहस नगर्नुहोस्।
आज तपाईका लागि केहि पैसा खर्च गर्ने अवसर छ, जुन व्यावहारिक र सामाजिक कार्यको लागि बाहिर जाँदा हुन सक्छ। खानपानमा सावधानी अपनाउनुहोला । क्रोधबाट टाढा जानुहोस्। सकारात्मकको साथ नकारात्मक भावनाहरू हटाउनुहोस्। व्यापार व्यवसायमा अनुकूलता रहनेछ। साझेदारहरूसँग मतभिन्नता नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोला । सरकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित काममा आफ्नो क्षमताको सदुपयोग गर्न सकिनेछ ।
See also नव वर्ष २०७९ कस्तो रहला ?
आज तपाईंले दृढ मनोबल र आत्मविश्वासका साथ हरेक काम गर्नुहुनेछ। बसाइँसराइ वा पर्यटनको सम्भावना उच्च छ। मिष्ठान्न परिकारको रमाइलो र नयाँ लुगा लगाउने कार्यक्रम हुनेछ । साझेदारबाट लाभ मिल्नेछ। सवारी साधन उपलब्ध हुनेछ।
आजको दिन शुभ रहेको गणेश बताउँछन् । तपाईमा थप मनोबल र आत्मविश्वास हुनेछ। शारीरिक रुपमा स्वस्थ रहनुहुनेछ । पारिवारिक वातावरण पनि शान्त रहनेछ। प्रतिद्वन्द्वीहरुका सामु विजयी हुनेछ । प्रकृतिबाट जोश र क्रोध हट्नेछ र साथसाथै वाणीमा संयम राख्नेछ। आज व्यवसायिक क्षेत्रमा सहकर्मीको राम्रो सहयोग मिल्नेछ। मातृ घरबाट समाचार प्राप्त हुनेछ।
स्रोत: गणेश स्पीक्स
Previous articleआज (मंगलबार) मीनको मनमा हर्ष, मिथुनको पुराना काम सफल हुने, कुन राशिको कस्तो ?- Daily Horoscope
Next articleचियासँग भुलेर पनि नखानुहोस् यी चिज, नत्र पछुताउनु पर्नेछ -Don’t eat these things with tea